Madaxweyne Farmaajo oo beri kulan la qaadanaya madaxda maamul goboleedyada. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Madaxweyne Farmaajo oo beri kulan la qaadanaya madaxda maamul goboleedyada.
Madaxweynaha dalka Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo), ayaa maalinimada beri oo Isniin ah waxa uu kulan la qaadanayaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ka jira.
Xoggo lagu kalsoon yahay oo ay heshay Warbaahinta Xaldoon.Net, ayaa sheegeysa in madaxda maamul goboleedyada ay dhamaantood aqbaleen casuumadda madaxweynaha ee ah ka qeyb galka kulankan oo arrimo xasaasi ah looga hadli doono.
Waxyaabaha kulanka beri diirada lagu saari doono waxaa qeyb ka ah; xal u helista khilaafka dowladda iyo maamulada qaar, diyaarinta nooc doorasho oo wada ogol lagu yahay iyo sidii maamulada looga tala galin lahaa sharciyada ay baarlamaanka meel mariyaan.
Kulanka oo ku qabsoomi doono aallada Zoomka-ka ayaa waxaa sidoo kale la filayaa iney goob jog ka ahaadaan xubno kamid ah maamulka gobolka Banaadir.
Previous Galmudug oo diiday inay qeyb ka noqoto War saxaafadeed ka soo bixi lahaa Maamul Goboleedyada
Next GUDIGA WADADA CEERIGAABO IYO CEEL-DAAHIR “DAAMURKA WADADA WAXAAN KU SOO QAADNAY AMAAH